विवाहको भोलिपल्ट बिहानै बेहुलाको रहस्यमय मृत्यु
रुपन्देही, असार ३
प्रदेश ५ अन्तर्गत रुपन्देहीमा केही दिनअघि एक युवा जबर्जस्ती विवाहको अर्को दिन बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्वर–७ अमुवा हिरागञ्जका ३२ वर्षीय कर्णबहादुर बुढाथोकीलाई स्थानीय अन्दाजी ३२ वर्षीया रुक्मणी खवाससँग माया प्रेम रहेको भन्दै उनको समुदायले जेठ २४ गते विवाह गराएका थिए । त्यस विवाहलाई बुढाथोकीका परिवारजनले जबर्जस्ती भनेका छन् । लामो समयदेखि उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्दै ती युवतीका परिवारजनले बुढाथोकीको छिमेकमै आई उनलाई विवाह नगरे ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिई जबर्जस्ती विवाह गराइदिएको बुढाथोकीका आफन्त नैनबहादुर लोकचनले बताए । ‘केटा र उनका परिवारले उनलाई विवाह गर्नै मानेका थिएनन्’, उनले भने, ‘केटी पक्षको ठूलो जमात आई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएपछि विवाह गर्न बाध्य भएका थिए ।’
जबर्जस्ती विवाह भएका कारण घरमा बस्न नचाहेर बुटवलको दोस्ती रेष्टुरेन्ट एण्ड लजमा उनीहरु दुवै जना बस्न गएका थिए त्यस रात । त्यस लजका सञ्चालक किरण पाण्डेसँग सम्पर्क राख्दा उनले भने, ‘उनीहरु त्यस्तै साँझ ६ बजेतिर आएका थिए । १०८ नम्बर रुम बुक गरेका थिए । उनीहरुसँग एक महिलासहित ८/९ जना मानिसहरु पनि आएका थिए । अरु मानिसहरु राति साढे १० बजेसम्म मादक पदार्थ सेवन गर्दै बसेका थिए । केही विवादजस्तो पनि पाइन्थ्यो तर हामी त्यतापट्टि लागेनौँ । उनीहरु सबै जना राति हिँडेपछि उनीहरु दुई जना त्यस रुममा सुत्न गएका थिए । बिहान साढे ६ बजेतिर उनीहरु दुवै जना कोठाबाट निस्केर ढोका खोल्न लगाए । हाम्रो स्टाफले ढोका खोलेपछि नवदुलही सामान किन्न भन्दै बाहिर निस्किइन् । त्यसपछि बेहुला कोठाभित्र गए । उनी करिब २० मिनेटमा फर्किइन् । कोठामा जाँदा चुक्कुल लगाएको देखेपछि स्टाफलाई बोलाएर ढोका हानेर खोल्दा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीलाई फोन हानेर बोलाएका हौँ ।’
मृतक बुढाथोकीका परिवारजन उनको मृत्युलाई रहस्यमय भन्दै छानबिनका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । झुण्डिएको कोठाको ढोका खाल्दा चुक्कुल अडाउने किलाहरु नभाँचिनु, सेतो तन्नाको डोरी बनाएर पंखाको हुपमा नभई त्यसको पातामा डोरी थियो भनिनु, मृतकका परिवारजनलाई पहिला थाहा नदिई केटी पक्षका मानिसहरुलाई बोलाई शव उठाउन, करिब डेढ घण्टा पनि लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा शव पु-याएपछि मात्र आफूहरुलाई खबर गरिनुले उनको मृत्यु घटना रहस्यमय रहेको मृतकका परिवाजनको भनाइ छ ।
रोई रोई जोडेको नाता पाइयो : डीएसपी भट्टराई :- घटनाका सम्बन्धमा बुटवल इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी केशव भट्टराईसँग सम्पर्क राख्दा उनले परिवारजनले जबर्जस्ती विवाहको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको क्रममा त्यस्तो नखुलेको बताए । उनले भने, ‘ती महिलासँग बुझ्दा राजीखुसी विवाह गरेको खुलेको छ । २४ गते दिउँसो छिमेकी ती युवतीका आफन्तले स्थानीयको एक घरमा ती युवासँग भेट गराएको उनले बताएकी छिन् । उनले भनेकी छन्, ‘हामी दुई जनासँगै एक्लै कोठामा बस्यौं । विगतको माया प्रेमको कुरा सम्झेर दुवै जना धेरै बेरसम्म रोयौं । दुवैले बिहे गरेर सँगै बस्ने हामीले निर्णय गरेपछि सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे । त्यहाँबाट हामी सिद्धबाबातिर आएर साँझसम्म बस्यौँ र होटलमा सुहागरात मनाउन भन्दै गएका थियौं ।’ डीएसपी भट्टराईका अनुसार ती दुई जना होटलमा गइसकेपछि मात्र चार/पाँच जना उनका आफन्त त्यस होटलमा पुगेका थिए । घटनाको गम्भीर ढंगसँग अनुसन्धान भइरहेको र ती होटलमा पुगेकाहरुसँग सोधपुछ हुँदै गरेको डीएसपी भट्टराईले बताए ।
विवाहपछि हाँसीखुसी थिए : प्रत्यक्षदर्शी :- विवाहको साँझ होटलमा पुगेका बुढाथोकीका साथी कमल भट्टराईले त्यस दिन साँझ उनीहरु हाँसीखुसी रहेको बताए । उनले भने, ‘उनी र म २२ वर्षदेखि निर्माणक्षेत्रमा सँगै काम गर्दै आएका थियौं । ऊ मेरो मुटु थियो । ती केटी थारु समुदायकी हुन् । १२–१५ वर्षदेखि उनीसँग माया प्रेम थियो । तर गत एक वर्षदेखि उनीहरुको सम्बन्ध टाढिएपछि त्यहाँको समुदायले पटक–पटक उनीहरुलाई भेट गराउन खोजे । केटीले समुदायले भेट गराउने आशा मारेर आफैँ केटाको छिमेकमा आएर विवाह गरेका हुन् । त्यो समुदायले हामी नजिकको साथी भएकोले मलाई पनि विवाहका लागि सकारात्मक बनाउन खोजेका थिए । होटलमा हाँसीखुसी कुराकानी गरियो । भन्न त उसले भनेको थियो, त्यहाँका दिदीबहिनीहरुले विवाहका लागि दबाब दिए भनेर । मृतक पक्षका नैनबहादुर लोकचन भन्छन्, ‘भट्टराई र मृतक पहिलेदेखिका मिलनसार साथी र निर्माण सेवा कम्पनीमा समेत पार्टनर थिए । तर पहिलाजस्तो उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।
पहिला ती युवतीसँग विवाह नगर्न सुझाउने मान्छे भट्टराई थिए । तर पछि विवाह गर्न दबाब दिनेमध्येका उनै हुन पुगे । यस विषयमा हामीलाई थुप्रैखाले आशंका छ । मृतककी आमा हिमकुमारी बुढाथोकीले विवाहका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विवाह नगरे मेरो छोरालाई ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि छोराले बिहे गर्न मानेकै थिएन । उनले थपिन्, ‘मेरो छोराले आफैँ ज्यान हालेकै होइन, कसैले ज्यान लिएको हामीलाई आशंका छ ।’ उनीसहित मृतकको आफन्तले यतिका दिनदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत यो घटना गुपचुप पारिएको गुनासो गरे । बुढाथोकी र भट्टराई सुशीला निर्माण सेवा प्रा.लि. संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरी ठेक्कापट्टा गर्दै आइरहेका थिए । मृतक बुढाथोकीको पुख्र्यौली घर बाग्लुङ्गको बुर्तिबाङ्ग हो । (आर्थिक दैनिकबाट)
आवश्यक जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले उल्लेख्य रुपमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । नयाँ...
निःशुल्क आँखा शिविर
एकादशी पर्वको अवसरमा पाल्पाको बालीघाटमा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिविरमा ८७ ज्येष्ठ नागरिकको आँखा परीक्षण...
एक करोड जरिवाना उठाउन बाँकी
सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतले रु एक करोड १२ लाख ६६ हजार ५१२ जरिवाना उठाउन बाँकी छ । अदालतको विवरणानुसार कात्तिक...
पालुङटारमा नेवाः घरबास
दिसापिसाब व्यवस्थापनमा उदासीनता
ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि पुल निर्माण अलपत्र
घुम्ती शिविरबाट बाह्र सय लाभान्वित
रुपन्देहीका तीन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रर्वद्धन हुँदै
रग्बी फेस्टिभल एण्ड लाइभ म्युजिकमा दुई दर्जन बढी कलाकार एकै मञ्चमा
रग्बी वर्ल्ड कप टुर नेपाल रग्बी फेस्टिभल तथा लाइभ म्युजिक कार्यक्रममा नेपाली संगीत तथा फिल्म क्षेत्रमा २ दर्जन...
खुमन र गायत्रीको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक
घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?
नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...
यसपालिको दशैं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुदूर पर्यटनमा टेवा